UBAXA IXORA: DARYEELKA, BEERISTA IYO DHALMADA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Ixora - warshad kuleyl ah, oo lagu magacaabay ilaah Hindu. Muuqaalka muuqaalkiisa, ubaxkan waxaa loo tixgeliyaa geedka ugu quruxda badan guriga. Ixora waa geed dherer dheer, oo lagu gartey midab khafiif ah, midab tayo qani ah iyo dallad-qaabab duufan ah. Ubaxa Home wuxuu noqon doonaa kibir ee milki kasta, laakiin marka hore waxaad u baahan tahay in la ogaado iyo tixgeliyo waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka isaga.
Xaggee la dhigaa ubaxa
Maaddaama Ixory ay guriga ku leedahay tropics Hindi, warshadani waa mid diirran. Si aad u habboonaato cayayaanka, daryeelka guriga waa in ay ahaato mid gaar ah. Iftiiminta, heerkulka, ciidda, waraabinta iyo bacriminta ubaxa dhammaantood waa mid muhiim u ah muuqaalka muuqaalka geedka.
Goobta beeritaanka dhirta Ixora waa inay buuxisaa shuruudaha sida qadar ku filan iftiinka dabiiciga ah iyo heerkulka sare ee joogtada ah. Laakiin qorraxda tooska ah ee ubaxa waa in laga fogaadaa si aysan dhib u haysan.
Ixora waxay u baahan tahay helitaan joogta ah hawada cusub. In xilli diiran, waxaa fiican in aad ubax on balakoonka ama beerta. Heerkulka ugu fiican ee koritaanka dhirta waa 16-25 darajo kor u dhaafka eber.
Ma taqaanaa? Xaalad ubax waxay si deg deg ah u saameyneysaa isbeddelada ugu yar ee shuruudaha ay ka kooban tahay. Nasiib wanaag, dhibaatooyinka ayaa sidoo kale si dhakhso ah looga takhalusay: waxaad u baahan tahay inaad hubiso in waqtigii waraabinta ee warshadda, iftiinka iyo heerkulka.
Waa maxay nooca ciidda jecel ixora
Ixora waa wax xamaasad u leh ciidda. Waxa ugu wanaagsan ee lagu beeray dalag badan oo dhirta ubaxa leh, hodan ku ah macdanta iyo dabeecadda la yareeyey.
Dhulka noocan oo kale ah waxaa loo diyaarin karaa si madaxbannaan, laakiin tani waa lagama maarmaan in la isticmaalo qaybaha ugu tayada leh: dhulka, ciid, caleenta, peat, iwm.
Sidee Biyaha Ixora
Daryeelka ubaxyada ixora ee guriga waa in ay ahaato qadarin. Daryeel gaar ah waa in la siiyaa waraabinta. Inta lagu jiro dhirta ubax ee xagaaga, waraabinta waa inay ahaataa ugu yaraan saddex jeer toddobaadkii. Xilliga jiilaalka, inta badan soo noqnoqoshadu waa 6-8 maalmood. Carrabku waa in aan la qalajin, laakiin ma daadin.
Xayaysiinta midabka ayaa kugula talin kara isticmaalka biyaha la jilciya heerkulka qolka. Wixii saameyn weyn ku leh dhowr jeer bishii biyaha waxaa lagula talinayaa in lagu daro dhowr dhibcood oo liin ah (5 ml 1 l oo biyo ah).
Sidee iyo waxa bacrimiya ixora
Warshadu waxay si joogto ah ugu baahan tahay quudin gaar ah oo xoog leh. Xeryaha macdanta badan leh sida bacriminta for orchids ayaa ku habboon tan. Waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo ubax ugu yaraan laba jeer bishii, laakiin waa in la sameeyaa oo keliya xagaaga (xilliga qaboobaha waxaa fiican in la siiyo dhirta nasasho).
Qiyaasta iyo qawaaniinta quudinta carrada way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay diiradda walxaha firfircoon ee ka kooban bacriminta, markaa fiiro tusmooyinka ku qoran baakada.
Qawaaniinta Xawaarida Xayawaanka
Ixora waxay u baahan tahay sanadkiiba ku-tallaalid. Shanta sano ee ugu horreysa, ubaxa waa in lagu beeraa dherer ballaaran oo dhererkiisu badan yahay, iyo ka dib markii xoojinta nidaamka xididka, waa ku filan oo kaliya in la cusbooneysiiyo daaha sare ee carrada ee dheriga.
Waa mid aad u muhiim ah in dhererka koontadani uusan ahayn oo kaliya cabbirka ballaaran, laakiin sidoo kale wuxuu lahaa dalool ah si looga saaro biyaha xad-dhaafka ah!
Ugu horreyntii, waa in lakabyada dufanka la dhigo hoose ee dheriga, taas oo dammaanad qaadi doonta oo kaliya helitaanka oksijiin ku filan nidaamka xididka, laakiin sidoo kale ka saarista dheecaanka xad-dhaafka ah.
Waa muhiim! Waxaad ka iibsan kartaa dheecaan ubax ah dukaanka khaaska ah, laakiin dhexroorka maqaarku waa kala duwan yahay. Sidaa daraadeed, helitaanka dheecaan, waa lagama maarmaan in la caddeeyo ubaxa loo isticmaalo.
Ka dib markii dheecaan ayaa la dhigay, ubaxa waxaa lagu dhajiyey dherigii, nidaamka xididkiisa waxaa si taxadar leh loogu rakibay bartamaha, ka dibna ku budada leh isku dhafka dhirta gaarka ah, oo ay ku jiraan dhulka caleenta, peat, ciid, dhulka cawska, iwm.
Xidigga iyo jirridda ubaxa waxaa lagu shubaa isku dhafka dhoobada ah ee ku dhawaad ​​cidhifyada dheriga (ka dib marka ugu horeysa ee waraabinta, dhulku wuxuu dejin doonaa oo heystaa mugga caadiga ah).
Ixora waxay u guuraysaa meel cusub ilaa saddex toddobaad. Muddadan, ubaxa waxay u baahan tahay daryeel gaar ah.
Sida loo faafiyo ixora
Warshadda Ixora waxay ku faaftaa by gooyn, kuwaas oo la gooyaa si toos ah ka dib ubax ka socodka kasta oo aan ubaxin. Dhererka goynta noocan oo kale ah waa in aan ka badneyn 10 cm.Dhibaatada Ixora waa mid aad u xiisa badan, markaa waa inaadan ka xishoonin horumarkooda.
Boorso cusub oo la jarayo waa in si dhakhso ah loo qalajiyo oo xidid ku leh aqalka dhirta lagu koriyo, ama la dhigo biyo iyo sugitaanka nidaamka xididka si ay u koraan.
Si aad u soo saarto Ixory qaabka ugu horreeya, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diyaariyo ciid ah oo gaar ah oo badan oo ubax ah.
Waa muhiim! Guulaha xayawaannada heerarka marxaladani waxay si buuxda ugu tiirsan yihiin tayada ciidda la xushay. Waxaa lagu talinayaa in la doorto isku-dhafka buuxa ee macdanta iyo kiimikooyinka.
Qaabka labaad wuxuu sidoo kale u baahan yahay diyaarinta hordhaca ah: waxaad u baahan tahay inaad soo saarto korriinada korriinka dhirta (kahor biyaha biyaha, waa in laga baaraandego marinka jarista).
Nooca daryeelka ubaxa
Guriga, Ixora waa mid dhif ah. Dadku badiyaa waxay diidaan in ay jebiyaan ubax sababtoo ah shuruudaha sare ee dayactirka. Laakiin beerashada tayo sare leh oo aan ku haboonayn guriga oo ku filan in la ogaado sifooyinka iyo raacaan talooyinka.
Ixora waxay ku tiirsan tahay waraabinta joogtada ah, laakiin content-ka xad dhaafka ah ayaa burburin doonta ubaxa. Sidaa daraadeed, dheriga ku rid taangiyada biyaha waa mamnuuc.
Muddadii caleen dayrta (ka dib ubax), dhirta dhoobo. Tani waa nidaam caadi ah oo aan loo baahneyn cabasho. Laakiin xilliga ay burooyinku u muuqdaan ubax, dhaqdhaqaaqa ubaxu wuxuu u horseedi doonaa inay dhacaan.
Si aad u dhaqaajiso ubax iyo branching ee geedka, waxaa lagu talinayaa in la xoqo laanta sare. Tani waa in si taxadar leh loo sameeyaa, laakiin qiyaas ballaadhan, oo aan ka badnayn kala badh laamaha sare ee ubaxa.
Waa muhiim! Gooyooyinka iyo lafdhabarta laamaha guga (bilowga ubax) waxay horseedi doontaa hoos u dhac weyn oo ah koritaanka ubaxa.
Waa maxay sababta ixoru aan loo korin dhulka dhulka
Ixora, oo daryeelkooda gurigiisu aad u cakiran, lama korin karo dhulka. Tani waxay sabab u tahay arrimo badan, sida xasiloonida heerkulka hawada ama iftiinka.
Ubax waxaa si weyn loogu talinayaa in lagu beeray oo kaliya dheryihii, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada inay u guurto iyada oo ku xiran isbedelka heerkulka, heerka iftiinka dabiiciga ah iyo waxyaabo kale.
Xilliga diiran, dhirta Ixora waxaa laga qaadi karaa balakoonka ama beerta, si loo siiyo oksijiin ku filan. Fadlan ogsoonow in Ixora si xoog leh u dulqaadanayo isbadalada cimilada. Sababtan darteed, isbeddel deg-deg ah oo heerkulka iyo iftiinka qorraxda tooska ah ayaa waxyeello u geysanaya dhirta.
Sababtoo ah ilmo-galeenka cusub iyo calafaadihii hore ma istaagaan
Ruushku wuxuu doonayaa in uu beeralayda siiyay abuur tayo leh
Aynu caawinno sidii aan u noqon lahayn orchid: sida loo badbaadiyo ubax aan lahayn xididada iyo caleemaha, ama hal shey?
Waxaannu isku dayi doonaa caleemo orchid: maxaa saxda ah oo ay u burburineyso iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo marka la sameynayo tan?
Beer kasta oo beerta beertu waxay raadineysaa inay koraan xaddiga ugu badan ee dalagyada khudradda ku jira. Laakiin had iyo jeer maaha cabbirka dhulku uu kuu ogolaanayo inaad gaarto natiijada la rabay. Xaaladaha noocaas ah, aqalka dhirta lagu koriyo ee saqafka guryaha gaarka loo leeyahay ama xitaa aqalka dhirta saqafka sare ee garaashka ayaa noqon kara xal aan loo baahnayn. Read More
Sidee loo ilaaliyaa cuntada waddanka iyadoo aan qaboojiye ahayn?
Sida loo abuuro oo u koraan yaanyo "sharafka Siberia"